बिच समुन्द्रमा तैरिएकी थिइन् बालिका, जब उनलाई नाभिकले देखे खुलासा भयो भयानक रहस्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिच समुन्द्रमा तैरिएकी थिइन् बालिका, जब उनलाई नाभिकले देखे खुलासा भयो भयानक रहस्य
एजेन्सी । १९६१ मा बहामास नजिकैको समुन्द्री क्षेत्रमा एक ११ वर्षीया बालिकालाई समुन्द्रमा तैरिएको देखियो । यसलाई देख्ने मालवाहक जहाज थियोका मानिसहरु हैरान थिए । आखिर यस अथाह समुन्द्रमा यो एक्लै बालिका कहाँबाट आई र कसरी बाँची ?
बालिका काठको टुक्राको सहाराले समुन्द्रमा तैरी रहेकी थिई । उसलाई तत्काल समुन्द्रबाट बाहिर ल्याइयो । नाभिकहरुका लागि यी बालिका रहस्य बनेकी थिइ । तर, पछि ती बालिकाले निकै भयानक विपत सुनाइन् ।
११ वर्षीया टेरीले आफ्ना अभिभावक र दुई बहिनीका साथ विदा नाउन मिनी बोटबाट फ्लोरिडा गइरहेको बताइन् । उनका अनुसार जुन बोट उनीहरुले भाडामा लिएका थिए, सो बोटका मालिकले सबैलाई मारे । उनीमात्र बाँचिन । उनले यो घटना तीनचार दिन पहिला भएको बताइन् । यो सुनेर सबै दंग परे । आखिर बिनाखाना यो विशाल समुन्द्रमा ती बालिका कसरी बाँचिन्?
टेरीले आफ्नो नीँद खुलेपछि ड्याकमा आएको बताइन् । उनले त्यहाँको अवस्था देखेर निकै रोएकोसमेत बताइन् । त्यसै बेला बोट डुब्न थाल्यो । यसैक्रममा टेरीले एक सानो कन्टेरको सहारा लिइन् ।
यसैक्रममा बोटको मालिक जूलियन फ्लोरिडा तटमा एक मिनीबोटको सहारले पुगेको थाहा हुन्छ । उसको साथमा टेरीकी एक बहिनीको शव पनि हुन्छ । कोस्ट गार्डले जब उसलाई सोधपुछ गरे, उसले आफ्नो बोट तुफानको चपेटामा परेको र सबै मरेको बताउँछ । तर, जब जूलियनलाई टेरी जिवित रहेको खरब दिइन्छ, उ एक होटलमा आत्महत्या गर्छ ।
अनुसन्धानले जूलियन रिटार्यड आर्मी रहेको र उसैले यो घटना गराएको देखाउँछ । जूलियनले त्यस दिन सबैलाई मारेर भाग्छ । तर, टेरी निदाएकाले जिवीत हुन्छिन् ।
प्रहरीले यो घटनाबारे अध्यान अनुसन्धान गरेपछि सबै रहस्योद्घाटन हुन्छ ।
प्रहरीका अनुसार जूलियनलाई निकै आर्थिक संकट थियो । यस यात्रामा उसले टेरी र आफ्नो परिवारलाई फ्लोरिडा लैजाने बचन दिन्छ । केही दिन पहिला उसले श्रीमतीको वीमा गराएको थियो । सोही वीमाको पैसाको लालचमा उसले यो सबै गरेको थियो ।
उसले वीमाको लागि श्रीमतीलाई मार्यो । वीमा रक २० हजा। डरलको थियो । जूलियनकी पहिली श्रीमतीसँग पनि यस्तै घटना भएकाले प्रहरीलाई उमाथि शंका थियो । प्रहरीका अनुसार टेरीका आमाबाबुले जूलियनले आफ्नी श्रीमती मारेको देखेका थिए ।
त्यसैले उसले उनीहरुलाइ पनि मार्यो । भाग्यले टेरी बाँचिन् र यो भयानक हत्याको खुलासा भयो ।